हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनले ल्याउनसक्छ यस्तो रोग ! – झुल्केघाम
हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनले ल्याउनसक्छ यस्तो रोग !
मंसिर १८ १६:२३ १३०२
हामीले हेक्का नराखेको कुरा हुनसक्छ, हामीले प्रयोग गर्ने भाँडावर्तनको सोझो असर हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्छ । हामीले पकाउने भाँडा वर्तन, खाना पस्कने थाल आदि कुन धातुले बनेको हो ? कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने कुराले स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्छ । सामान्यतः हामी स्टील, एल्मुनियम, कपर, फलाम, सिसा, ननिस्टिक आदिको प्रयोग गर्छौ ।